Job @ MC - Myanmar Celebrity News | Entertainment News | Celebrity Gossips | MyanmarCelebrity.tv
Join MC Team
Job Opportunities @ MC Productions
မြန်မာ အနုပညာရှင်များ နှင့် ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ဝေေ၀ဆာဆာ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်တင်ဆက်နိုင်ရန် အောက်ပါ အလုပ်နေရာများအတွက် MC အဖွဲ့သားတွေနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် လူငယ်များကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။
1. Video Producer/ Editor (Video Editing) (Female/ Male)
- Adobe Premiere ဗီဒီယို Editing ကို ကျွမ်းကျင် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသော Video ထုတ်လုပ်မှု Portfolio ပြသ နိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
- ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်း Team Work ဖြင့် အလုပ်ကို လေးစားစွာ လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်း သဘာဝ အရ အလုပ်ကို အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရထားသူ (သို့) အနည်းဆုံး ၁၀ အောင်သူ ဖြစ်ရမည်။ 2. Videographer/ Video Reporter (Female/ Male)
- ကိုယ်တိုင် DSLR Camera ဖြင့် အနုပညာ သတင်းများကို ရိုက်ကူး၊ အပြီးသတ် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ် ထုတ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- Adobe Premiere ဗီဒီယို Editing ကို အခြေခံ အသုံးပြု နိုင်ရမည်။ - အနုပညာ သတင်းများကို စိတ်ဝင်စားစွာ တင်ဆက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်း Team Work ဖြင့် အလုပ်ကို လေးစားစွာ လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်း သဘာဝ အရ အလုပ်ကို အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရထားသူ (သို့) အနည်းဆုံး ၁၀ အောင်သူ ဖြစ်ရမည်။ 3. Entertainment News Reporter/ Writer (Female/ Male)
- အနုပညာ သတင်းများကို စိတ်ဝင်စားစွာ တင်ဆက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - မြန်မာစာ အရေးအသား ကျွမ်းကျင်ပြီး Computer အခြေခံ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်း Team Work ဖြင့် အလုပ်ကို လေးစားစွာ လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်း သဘာဝ အရ အလုပ်ကို အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရထားသူ (သို့) အနည်းဆုံး ၁၀ အောင်သူ ဖြစ်ရမည်။ လျှောက်ထားလို သူများသည် မိမိ ရဲ့ CV Form၊ ပညာအရည်အချင်း လက်မှတ် (Certificate)၊ ကိုယ့်ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှု Portfolio နှင့်တကွ မျှော်မှန်းလစာ တို့ကို “MyanmarCelebrity@gmail.com” သို့ ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသက် (၂၀) မှ (၃၀) အတွင်းရှိ ကျား၊ မ လူငယ်များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Media/ Journalism/ Communication Art ဘာသာရပ်များ နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ Degree (or) Diploma (or) Certificate တစ်ခုခု ရှိသူကို ဦးပေးမည်။ Please send your CV with your creatives to “MyanmarCelebrity@gmail.com”
Welcome to MC Team!
Myanmar Celebrity Entertainment Group Co., Ltd.
Swimsuit Round of Miss Universe Myanmar 2017 Beauty Pageant
ဖွေးဖွေး၊ စံထိပ်ထားဦး နှင့် မိကွန်ထော တို့ရဲ့ ပျိုမေ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်း
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်များအတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သူများ
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှ အနုပညာရှင် စုံတွဲတွေရဲ့ အကယ်ဒမီပွဲတက် ဖက်ရှင် [socialcounter]
Copyright © Myanmar Celebrity News | Entertainment News | Celebrity Gossips | MyanmarCelebrity.tv